Mersin Metro Pending nkwado site n’aka ndị isi ala | RayHaber
HomeTurkeyMediterranean Region33 MersinMersin Metro jidere n’aka Onye isi ala
27 / 07 / 2019 33 Mersin, Mediterranean Region, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Metro, Turkey
mersin metro na-eche nnabata n'aka ndị isi ala
Mersin Metropolitan Mayor Vahap Selecter, Onye Isi Obodo nke Afyon gara ịga Nzukọ Ọmụmụ lebara usoro a anya. N'ịkọwa ọrụ ndị ha ga-arụ na Mersin, Mayor Seçer nyere ozi ndị dị mkpa gbasara Projectlọ Ọrụ Metro nke bụ mmalite nke ọrụ ndị a.
Seçer kwusiri ike na ọ chọrọ iweta Mọnd ụzọ ụgbọ ala ngwa ngwa o kwere omume wee sị, iz Anyị enweghị nsogbu ego ebe a maka na ọ bụ ego na-eweta ego. Dịka amaara ama, nnabata ndi ụlọ ọrụ dị mkpa malitere ịbịa. Anyị na-agba ha ajụjụ ọnụ. Ọ ga-abụ ihe na-adịgide adịgide nke ga-eme ka obodo gị zuru ike, mee mkpọtụ ma kwụsị ọgba aghara okporo ụzọ. ”
"Achọrọ m iweta usoro ụgbọ okporo ígwè Mersin ozugbo enwere ike"
Seçer, onye ọrụ ya dịla njikere ma na-enye nkọwa gbasara Metro Project ha ga-amalite iwu na 2020, kwuru, Seç N'oge gara aga, arụchara ọrụ a. Ọ na-eche ugbu a maka usoro itinye ego na ndị isi oche. Nke ahụ bụ ihe m ga-eme. Achọrọ m inye Mersin ụzọ ụgbọ ala ozugbo enwere ike. Anyị enweghị ụkọ ego ebe a n'ihi na ọ bụ itinye ego na-akpata ego. Dịka amaara ama, nnabata ndi ụlọ ọrụ dị mkpa malitere ịbịa. Anyị na-agba ha ajụjụ ọnụ. Ọ ga-abụ ọrụ ga-ewe ogologo oge ga-ezu ike obodo ahụ, mee mkpọtụ ma gbochie ọgba aghara okporo ụzọ. Anyị chọrọ ịmalite na 2020. Ikwesiri inwe obi ike. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta obodo mepere anya, ị ga-arụ ọrụ ndị a ”.
Mersin Metro ga-abụ otu n'ime ụgbọ oloko ole na ole na mba anyị mgbe Istanbul, Ankara na Izmir n'ihi mmetụta nke imebe obodo na nchebe nke ime obodo, na-atụle ihe owuwu nke obodo ahụ.
Site na ịbanye na mbụ na mba ahụ, ọ ga-emepụta usoro ebe ndị mmadụ nwere ike ịga ebe a chọrọ ya n'obodo ahụ na nkasi obi metro site n'iji ígwè, ọgba tum tum na ụgbọala gaa n'ogige ntụrụndụ na-eche nche ma na-eche nche n'ọdụ ụgbọ elu.
N'ime oru ngo, n'iji teknụzụ kachasị ọhụrụ n'ụwa dum, tube 10 mpempe mpempe akwụkwọ ọzọ na usoro tube Single na mba anyị site na ịbanye na mbụ nke nchekwa, nke siri ike, nke dị mfe na ngwa ngwa iji wuo metro na-ezube ka agwụchaa n'ụzọ kachasị ọsọ ma zute ndị Mersin.
Metropolitan Municipality, okporo ụzọ, na ijikọta okporo ígwè na oké osimiri, ikwe na mwekota nke iga, guzosie ike mbụ ụzọ ụgbọ oloko usoro na Turkey, ụmụ amaala nke nyefe ebe-enweghị na-emetụta oghom ọnọdụ ihu igwe na obodo a na-emebe a ngo ha aka iji nweta ihe kasị ekwe omume ụzọ.
Buca Metro 18 bụ ichere maka nkwenye site na Ankara
Akwụkwọ bụ Smart City Book nke Kahramanmaras
Malite enweta Presidential Ịgba ígwè Tour of Turkey
Presidential Ịgba ígwè Tour of Turkey 6. Ogbo ...
Ụgbọ njem ndị ọzọ na-ebugharị ụgbọ mmiri maka njem nleta ndị isi nke ndị isi
Yandex nsoro, Onye isi oche nke baasti…
Ndị na-achụ ego chọrọ maka Mersin Metro si obodo
BTK na TITR na-echere njem ụgbọ okporo ígwè
ASELSAN's Railway Welding Design Works Na-arụ Ọrụ…
Ankara Atụmanya anya maka Buca Metro rutere
Doha Metro iji mezuo tupu 2022 World Cup emepe
Ụzọ Mersin Metro
Mersin Metro ụgbọ elu
Mousin okporo ígwè ọrụ
Usoro okporo ụzọ Mersin
Kpọtụrụ vahap ozugbo
New Bus Stations na Salihli